Sheekooyinka Summit - Axdiga Barashada Summit
Marwo Leslie Anne DeLair
12 sano ah halyeeyga waxbarista luqadda
Waxaan bilaabay inaan wax ka barto Axdiga Barashada Summit bilowgii - 2008 ka hor intaan xitaa loogu yeerin Summit. Iskuulkani wuxuu ka soocay booqashada-guriga, gabi ahaanba qayb ka mid ah khadka tooska ah ee internetka illaa xoogaa abuuritaan isku dhafan. Qaabka hadda jira wuxuu bixiyaa fursado badan oo khadka tooska ah iyo shaqsiyeed ah oo qofka waxbarta mas'uul ka ah waxbarashadiisa. Waxay iyagu doortaan manhajka ugu fiican ee iyaga u shaqeeya - khadka tooska ah, shaqsi ahaan, ama labadaba oo la isku daro. Waxaa jira xorriyad badan oo loogu talagalay ardayda moodellada khadka tooska ah laga isticmaalo, laakiin qaar badan oo ka mid ahi ma oga inay xorriyadda macallimiintu sidoo kale leeyihiin. Shir-madaxeedku wuxuu macallimiinta siiyaa xorriyad ay ku helaan habka ugu wanaagsan ee wax lagu baro ardayda. Sababta aan ugu dheeraaday iskuulkan maahan oo kaliya sababta oo ah ardaydeena iyo qoysaskeenu waa kuwo cajiib ah, laakiin shaqaalaheenu gabi ahaanba waa wax layaableh! Weligaa ma heli doontid koox macallimiin ah oo u heellan ardaydooda. Waxaan ku baran doonnaa xiisahayaga fasallada shaqsiyeed ee kobcinta. Waxaa nalagu dhiiri galiyay in aan isbadal sameyno marka wax aysan shaqeyneyn. Sababta dugsigani u yahay sida uu maanta yahay maxaa yeelay macallimiinta iyo shaqaaluhuba sidaasay ka dhigeen. Waan haynnaa wixii shaqeeya waxaanan beddelaynaa wixii aan shaqeynin. Natiijada? Iskuul bixiya dabacsanaanta waxbarashada ardayga, iskuul ku dhiiri geliya macalimiinta inay bartaan waxa ay aadka u jecelyihiin, iskuul ka mid ah iskuulada internetka ee ugu sareeya gobolka, iskuul nooc ka mid ah a The natiijada waa Summit.
Macallinka Dugsiga Hoose ee Sannadka 1aad
Waxaan wax ku baray laba fasal oo fasal ah 5 fasal ah oo ku yaal laba iskuul oo dowladeed oo kaladuwan muddo dhan 5 sano ka hor intaanan imaan Axdiga Waxbarshada Summit. U shaqeynta Axdiga Waxbarista Sumcadda ayaa si daacad ah riyo u rumowday. Waa wax walba oo aan ku jeclahay ka shaqeynta waxbarashada iyada oo aan midkoodna laga fileynin caqli-gal aan macquul ahayn oo nidaamku u dejinayo macallimiinta. Cabbirka fasalada halkan waa kuwo ka macquulsan macallin walbana waxaa la siiyaa waqti ku filan oo qorsheysan oo saacad walba ah. Ka shaqeynta halkan micnaheedu waa mar dambe isku dayin in lagu tuuro 30 oo lagu daro carruurta sii kordheysa iyo miisasaska fasalka fasaxa ah ama ka shaqeynta usbuuca dhammaadka keliya si arrimaha loo sii wado. Caruurta halkan joogta waxay awoodaan inay wax bartaan inta ay helayaan feejignaan shaqsiyeed iyo tilmaam ay u qalmaan iyadoon macalinku dareemin inuu xadkiisa gaarsiisan yahay. Ka shaqeynta halkaan micnaheedu waa in aanan ku xirin manhaj qaas ah oo la igu amray in aan baro in kastoo loo eegeyn ku habboonaanta ardeyda. Waxaan xor u ahay inaan baro maadooyinka aan ku fiicanahay kuna faraxsanahay, siyaabaha khibradeyda iyo khibradeyda ay u qeexaan. Summit wuxuu rumeysan yahay shaqaalaheeda inay noqon doonaan xirfadlayaal loo tababaray in aan noqono oo aan howlaheena ku qabanno sida ugu wanaagsan ee anfaca ardayda. Ahaanshaha macalin cusub ee shir-madaxeedka waxay ahayd mid hawo hawo leh oo aan hubaa inaan ka shaqeynayo meelkasta oo kale waxay noqon laheyd talaabo gadaal u socota horumarka shaqadeyda.
La-Taliyaha Sare ee Sanadka 2-aad
Tan iyo markii aan ku soo biiray kooxda Summit ee cajiibka ah dhammaadkii sanad dugsiyeedka la soo dhaafay, waxaan helay khibrad aad u fiican oo ah inaan la shaqeeyo ardayda dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha, kana caawiyo iyaga sidii ay u gaari lahaayeen yoolalkooda waxbarasho. Waxaa ii mudneyd inaan iskaashi la yeesho kaliya Kulliyadaha Summit Early College iyo Virtual Program Team, laakiin sidoo kale shaqsiyaadka Kulliyadaha Bulshada ee Clackamas. Wadashaqeyntani gaar ahaan waxay ii ogolaatay inaan sifiican ugu adeego kiiskeyga ardayda isla markaana gacan ka geysto sidii looga dhigi lahaa dugsiga sare ilaa qorshaha dugsiga sare ka dib si aan qarsoodi lahayn. Waxaan qiimeyneyaa Sumcadda Shirweynaha, ardeyda, iyo qoysaskooda ee aniga igu dhex jira.
Xisaabta Sanadka 1aad ee Dugsiga Sare
Ka dib shan sano oo aan xisaabta ku baranayay buugaagta iyo kuwa madaafiicda, waxaan danaynayay inaan sahamin ku sameeyo sida barashada khadka tooska ah ay saameyn ugu yeelan karto barista barashadayda. Waxaan doonayay fiditaan iyo waayo-aragnimo cusub. Waxaan aqbalay jago jago Summit sanad dugsiyeedka 19-20 iskumana farxin karo.
Himilooyinkeyga mid ka mid ah barayaashayda ayaa ah inaan xisaabta ka dhigo mid u sahlan arday kasta. Shir-weynaha ayaa igu taageeray hadafkan aniga oo ii soo bandhigaya caqabado cusub, dhiirrigelinaya madax-bannaanideyda, iyo aaminaadda fikradayda. Waxaan dareemayaa in la ii qiimeeyay shaqsi ahaan. Waan ogahay in tabarucadayda la soo dhoweynayo oo ay leedahay saameyn togan.
Ku dhawaad ​​hal sano ayaan ku xirnaa! Waxaan dareemayaa sharaf iyo dhiirrigelin maalin kasta. Waan ogahay inaan ahay aqoonyahan ka fiican sidii aan ahay sanad ka hor. Waxaan halkan ka dhiseynaa wax runtii cajiib ah.